Downloads 69 424
Mpanoratra: Thomas Ruth, famoahana an'i ricardo_tv
Ny lava indrindra sy mavesatra indrindra fiaramanidina eto amin'izao tontolo izao indray amin'ny Rikoooo ao amin'ny mpandeha Bible (noforonina) tafiditra amin'ny orinasa: Air France, American Airlines, British Airways, Lufthansa, loko fotsy sy ny mpanamboatra loko (Antonov).
Ny Antonov An-225 Mriya ( "The Dream" ao amin'ny Okrainiana) dia fitaterana fiaramanidina jetliner, izay nanamboatra tao amin'ny Okrainiana Sovietika Repoblika Sosialista, ary nomena ny fehezan-dalàna anarana ho an'ny OTAN "Cossack" (An-124 dia ny an'i "Condor" ). Ity fiaramanidina dia avy miavaka ny habeny afaka nitondra lehibe sy ny enta-mavesatra ny be lavitra. Izany no lava indrindra sy mavesatra indrindra fiaramanidina eto amin'izao tontolo izao, fa ny faharoa eo amin'ny lafiny ambaratonga, ao ambadiky ny goavam-be H-4 seaplane Hercules.
Araka ny Anatoly Boulanenko, ny An-225 tsy mbola zatra ny rehetra mety ho vitany sy, indray Araka ny heviny, ny An-225 dia toy maneuverable toy ny mpiady. Eny tokoa, nandritra ny fihetsiketsehana ny ao amin'ny Le Bourget, dia banked Tamin'ny taona zoro ny 45 ° amin'ny sambon-danitra Buran ny 62 taonina tia ny fuselage.